2017-11-17 @ 17:27 in Ankapobeny
Raha niezaka ny hamita ity vary mangatsiaka ity aho dia nampiasa ny teny hoe karetsaka na ikaretsaka, teny mahagasy fahiny mbola miasa ankehitriny fa amin'ilay dikany iray monja. Fantaro ho an'izay tsy mbola mahalala fa efa nametraka anarana alika ihany ny Malagasy fahiny, tsy milou na bobby no anarana nalaza fa ikaretsaka, nahoana no izay anarana izay? Noho ilay anarana natao hiambina na hidim-baravarana ve? Tsy izay ihany fa ilay afa-mivezivezy na mikaretsaka mety ho azo adika hoe 'vas et viens' araka ny tenintsika malagasy ankehitriny.
Dikany ihany koa ilay hoe mivezivezy haingana, tonga haingana any amin'ny toerana andehanana... avy amin'izany no nahatonga ny taxi hanana anarana hoe fiara karetsaka, mahatonga haingana amin'izay aleha, fa tsy hoe karetsaka ny hidim-baravaran'ilay fiara... Tadidio izay dikany faharoa izay.